အသုံးပြုသူ:Bhone.bm/sandbox - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာမျက်နှာသည် Bhone.bm ၏ ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ရန်စာမျက်နှာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ရန်စာမျက်နှာသည် ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၏ စာမျက်နှာခွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းကို စမ်းသပ်ရန်၊ လက်သွေးရန် နေရာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝီကီဆောင်းပါးတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ရန်စာမျက်နှာတစ်ခု ရယူရန်၊ ဤနေရာတွင် ဖန်တီးနိုင်သည်။
အခြားစမ်းသပ်ရန်စာမျက်နှာများ - ပင်မ sandbox | Template sandbox
၁ Recent changes in simple way
၄ မုန်တိုင်း storm
၇ Extraterrestrial storms
၈ Effects on human society
၉ Notable storms in art and culture
၉.၁ In mythology and literature
၉.၂ In fine art
၉.၃ In motion pictures
၉.၄ In music
Recent changes in simple way[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှ ကြက်တောင်ရိုက်အားကစားနည်း
၁၉၉၂ နွေရာသီ ပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်များစာရင်း
ဟော်တင်ဟို ၂၂၉ လေယာဉ်
တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီရှိုးပွဲ (၂၀၁၄ တီဗီစီးရီး)
၂၀၁၈ အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
၂၀၁၄ အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
၂၀၁၀ အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး ထိုင်တော်မူ ဂေါတမဗုဒ္ဓ
အေရိယယ် ဖော်မြူလာ အစည်းအဝေး
အာဆင်နယ်ဘောလုံးအသင်း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရာသီ
တရုတ်'ယုန်'စာလုံးပါ ရေးနည်း ၈-မျိုး
တယ်ဟုန် ရှမ်း နှင့် ဂျိန်းဖော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု
၁၉၈၄ နွေရာသီ ပါရာလမ်းပစ်ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
အာရှ မသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ
အာဂျင်တီးနား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော ပဟေဠိ ဖြစ်ရပ်ဆန်း
ဘာသာမပြန်မီ အများသဘောတူမည့် နာမည်များကို အလျင် စီစဉ်ခြင်း
Craig Agena & ကရိတ် အဂျီနာ
Abdul Razak Alhassan & အဘဒူ ရာဇက် အလ်ဟတ်ဆန်
Kevin Asano & ကယ်ဗင် အဆနို
Michael Barnes (judoka) & မိုက်ကယ် ဘားနစ် (ဂျူဒိုခ)
Brett Barron & ဘရက် ဘာရွန်
Alan Belcher & အလန် ဘဲလ်ချာ
Robert Berland & ရောဘတ် ဘားလန်း
Brad Bolen & ဘရက် ဘိုလင်
Martin Boonzaayer & မာတင် ဘွန်းဇားယာ
Joseph Bost & ဂျိုးဇက် ဘို့စ်
Jim Bregman & ဂျင် ဘရဂ်မန်း
Colton Brown & ကိုလ်တန် ဘရောင်း
Patrick Burris & ပက်ထရစ် ဘားရစ်
Anthony Camal & အန်သိုနီ ကမဲ
Ben Nighthorse Campbell & ဘင် နိုက်သောစ် ကမ်ဘဲလ်
Milt Campbell & မစ် ကမ်ဘဲလ်
Arthur Canario & အာသာ ကနေရီယို
Rene Capo & ရီနီ ကပို
Shonie Carter & ရှိုနီး ကာတာ
Gokor Chivichyan & ဂိုကော် ချီဗစ်ချန်
Allen Coage & အယ်လင် ကို့ဂျ်
Aaron Cohen (judoka) & အားရွန် ကိုဟင်
Irwin Cohen & အာဝင် ကိုဟင်
Steve Cohen (judoka) & စတိ ကိုဟင်
Wesley Correira & ဝီစလီ ကော်ရီးရာ
Tim Credeur & တင် ကရဲဒါး
Dartanyon Crockett & ဒါတန်ယွန် ကရော့ကက်
Richard Crunkilton & ရစ်ချတ် ခရန့်ကီးတန်
Nicholas Delpopolo & နီကိုလပ် ဒဲပိုပိုလို
Adonis Diaz & အဒိုနစ် ဒီယက်
Nick Diaz & နစ် ဒီယက်
Donn F. Draeger & ဒွန်း အက်ဖ် ဒရေ့ဂျာ
Motohiko Eguchi & မိုတိုဟိကို အဲ့ငုချိ
Richard Elizalde & ရစ်ချတ် အဲလီဇလ်ဒ်
David Faulkner (judoka) & ဒေးဗစ် ဖောကနာ
Rhadi Ferguson & ရာဒီ ဖာဂူဆန်
Jacob Flores & ဂျကော့ ဖလောရက်
Jason David Frank & ဂျေဆင် ဒေးဗစ် ဖရန့်
Don Frye & ဒွန်း ဖရိုင်း
Orlando Fuentes & အော်လန်ဒို ဖွင့်တက်
Aaron Fukuhara & အားရွန် ဖုကုဟရ
Manvel Gamburyan & မန်ဗယ် ဂမ်ဘားယန်
Glacier (wrestler) & ဂလာဆီယာ
Jesse Glover & ဂျက်စီ ဂလပ်ဗာ
Ben Goodrich & ဘင်း ဂူးဒရစ်
Brandan Greczkowski & ဘရန်ဒန် ဂျက်ကောစကီ
Melvin Guillard & မဲဗင် ဂီးလာ့
Ato Hand & အတို ဟန်း
Scott Haraburda & စကော့ ဟာရာဘားဒါ
George Harris (judoka) & ဂျော့ ဟားရစ်
Kenny Hashimoto & ကင်နီ ဟရှီမိုတို
Rick Hawn & ရစ် ဟောန်
Krazy George Henderson & ကရေဇီ ဂျော့ ဟင်ဒါဆင်
Ryan Higa & ရိုင်ယန် ဟိဂါ
Nobuyoshi Higashi & နိုဘုယိုရှီ ဟိငရှီ
Shintaro Higashi & ရှင်းတရို ဟိငရှီ
Howard Fish & ဟောင်းဝဒ် ဖစ်
Dan Ige & ဒန် အိငဲ
Toby Imada & တိုဘီ အိမဒ
Barry Kirk Jackman & ဘာရီ ကာ့ ဂျက်မန်း
Wally Jay & ဝေါလီ ဂျေး
Samoa Joe & ဆာမိုအာ ဂျိုး
Teimoc Johnston-Ono & တေးမော့ ဂျွန်စတင် အိုနို
Jesse Jones (judoka) & ဂျက်စီ ဂျုံး
Stylianos Kalamaras & စတိုင်လီယာနော့ ကလာမရက်
Ryohei Kanokogi & ရောဟေး ကနိုခိုငိ
Karl Geis & ကားလ် ဂေယစ်
Damon Keeve & ဒေမွန် ကီးဗ်
Kyu Ha Kim & ကင်ကျူဟာ
Eichi Karl Koiwai & အေးချိ ကားလ် ကွိုဝိုင်း
Nick Kossor & နစ် ကော့ဆာ
Kane Kosugi & ကိန်း ခိုစုငိ
Vladimir Kozlov & ဗလာဒီမာ ကော့ဇလော့
Gene LeBell & ဂျင်းနီ လဘဲ
Parnel Legros & ပါနဲ လက်ဂရော့
Bryan Leininger & ဘရိုင်ယန် လေနင်ဂါ
Christophe Leininger & ခရစ္စတို လေနင်ဂါ
Mark Leon & မာ့က် လီယွန်
Bernard Lepkofker & ဘားနဒ် လက်ကို့ဖ်ကာ
Edward Liddie & အဒ်ဝပ် လစ်ဒီ
Bobby Lowe (karateka) & ဘော့ဘီ လိုဝီ
Ed Maley & အဒ် မာလီ
Lynn Manning & လင်း မန်းနင်း
Joe Marchal & ဂျိုး မာချယ်
Jimmy Martin (judo) & ဂျင်မီ မာတင်
Thomas Martin (judoka) & သောမတ် မာတင်
Paul Maruyama & ပေါ မာရုယမ
Daniel McCormick (judoka) & ဒန်နီယယ် မက်ကောမစ်
Antonio McKee & အန်တိုနီယို မက်ကီး
Neil Melanson & နီး မဲလန်ဆင်
Kyung-Ho Min & မင်ကျောင်းဟို
Dewey Mitchell & ဒူးဝီ မစ်ရှယ်
Roy Moore (wrestler) & ရွိုင် မူးရ်
Jason Morris & ဂျေဆင် မောရစ်
Yasuhiko Nagatoshi & နငတိုရှီ ယစုဟိခို
Keith Nakasone & ကေး နခစိုနယ်
Douglas Nelson & ဒေါက်ဂလပ် နလ်ဆင်
Ben Nguyen & ဘင် ငုယင်
Hayward Nishioka & ဟေးဝဒ် နီရှီအိုခ
Shiro Oishi & အိုအိရှီ ရှီရို
Kenneth Okada & ကင်းနက် အိုခဒ
Tony Okada & တိုနီ အိုခဒ
Gerald Okamura & ဂျရာဒ် အိုခမုရ
Henry Okamura & ဟင်နရီ အိုခမုရ
Brian Olson & ဘရိုင်ယန် အိုလ်ဆင်
Alex Ottiano & အဲလစ် အို့တီယန်နို
Erik Paulson & အာရစ် ပေါလ်ဆင်
James Pedro Sr. & ဂျိမ်း ပဲဒရို စီနီယာ
Jimmy Pedro & ဂျင်မီ ပဲဒရို
Myles Porter & မိုင်လစ် ပေါ်တာ
Philip S. Porter & ဖီးလစ် အက်စ် ပေါ်တာ
Ryan Reser & ရိုင်ယန် ရက်ဆာ
Daniel Roberts (fighter) & ဒန်နီယယ် ရောဘတ်
Luke Rockhold & လုခ် ရော့ကိုး
Theodore Roosevelt & သီအိုဒို ရုစဗဲ့
Gabe Ruediger & ဂဘီ ရူဒီဂါ
Antonio SabÃ to Jr. & အန်တိုနီယို ဆဘားတို ဂျူနီယာ
John Saxon & ဂျွန် ဆက်ဆွန်
Maxamillian Schneider & မက်ဇန်မီလျံ ရှနိုက်ဒါ
Steven Seagal & စတီဗင် ဆီးဂဲလ်
Steve Seck & စတီဗ် ဆက်
Dan Severn & ဒန် ဆဲဗန်
Stan Shaw & စတန် ရှော
Louis Smolka & လူးဝစ် စမိုလ်ကာ
Austin St. John & အော်စတင် စိန့် ဂျွန်
Garry St. Leger & ဂယ်ရီ စိန့် လက်ဂျာ
Mark Staniszewski & မာ့က် စတာနစ်ဇူးစကီ
Travis Stevens & ထရာဗစ် စတီဗင်
Johnny Strong & ဂျွန်နီ စထျောင်း
Clifton Sunada & ကလစ်ဖတန် စုနဒ
Bo Svenson & ဘို စဗင်ဆင်
Mike Swain & မိုက် ဆွိမ်း
Cub Swanson & ကဘ် ဆွမ်းဆန်
Taylor Takata & တေလာ တခတ
James Takemori & ဂျိမ်း တကဲမိုရိ
Masato Tamura & တမုရ မဆတို
Vince Tamura & ဗင်းစ် တမုရ
Robert Tanaka & ရောဘတ် တနခ
James Thompson (judoka) & ဂျိမ်း သွမ်ပဆင်
Frank Trigg & ဖရန့် ထရစ်
Ron Tripp & ရွန့ ထရစ်ပ်
Miguel Tudela (judoka) & မီဂုယယ် တုဒဲလာ
George Uchida & ဂျော့ အုချိဒ
Yosh Uchida & ယော့ရှ် အုချိဒ
Benny Urquidez & ဘင်နီ ယွာကွစ်ဒစ်
Kyle Vashkulat & ကိုင်လ် ဗရှ်ကူလတ်
Mike Vincenti & မိုက် ဗင်စင်တီ
Adler Volmar & အဒ်လာ ဗိုလ်မာ
Joseph Wanag & ဂျိုးဇက် ဝနဂ်
John Watts (judoka) & ဂျွန် ဝပ်
Jim Webb (judo) & ဂျင် ဝဘ်
Leo White (judoka) & လီယို ဝှိုက်
Taraje Williams-Murray & တရာဂျဲ ဝီလျံ မာရေး
David Williams (judoka) & ဒေးဗစ် ဝီလျံ
Jimmy Wooley & ဂျင်မီ ဝူးလီ
Clyde Worthen & ကလိုဒ် ဝေါသင်
Kenji Yamada (judoka) & ယာမဒ ကင်းဂျိ
Nicolas Yonezuka & နီကိုလပ် ယိုနဲဇုခ
Yoshisada Yonezuka & ယိုနဲဇုခ ယိုရှီစဒ
Larry Zbyszko & လာရီ ဇဘစ်ဇကို
မုန်တိုင်းသည် ဆိုးရွားသော ရာသီဥတု အခြေအနေ တခုကို ညွှန်းဆိုကာ၊ မိုးနှင့် မြေပြင် စစ်ခင်းသည့်အလား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို နှောင့်ယှက်သော ဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။
အနှောင့်အယှက် အဖျက်အဆီး ပြုလုပ်ပုံ များစွာ ရှိသည့်အနက် အောက်ပါတို့မှာ သိသာထင်ရှား၍ မုန်တိုင်းသွင်ပြင်အဖြစ် အကျုံး၀င်သည်။ လေပြင်း (strong wind)၊ လေဆင်နှာမောင်း (tornadoes)၊ မိုးသီး (hail)၊ မိုးကြိုး (thunder)၊ လျှပ်စီးလက် (lightning) သို့ မိုးကြိုးမုန်တိုင်း (thunderstorm)၊ ပြင်းထန်စွာ ရွာကျခြင်း (heavy precipitation) ဥပမာ နှင်းမုန်တိုင်း (snowstorm) နှင့် မိုးသက်မုန်တိုင်း (rainstorm)၊ ချမ်းစိမ့်မိုး ရွာခြင်း (heavy freezing rain) ဥပမာ ရေခဲမုန်တိုင်း (ice storm)၊ လေနီကြမ်း (strong winds) ဥပမာ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်း (tropical cyclone)၊ လေမုန်တိုင်း (windstorm)၊ အရာဝတ္ထုများကို လေထုထဲသို့ လေက တိုက်ခတ်သယ်ဆောင်သွားခြင်း ဥပမာ ဖုန်မုန်တိုင်း (dust storm)၊ ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း (blizzard)၊ သဲမုန်တိုင်း (sandstorm) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ //
Storms have the potential to harm lives and property via storm surge, heavy rain or snow causing flooding or road impassibility, lightning, wildfires, and vertical and horizontal wind shear. မုန်တိုင်းများသည် မုန်တိုင်းဝင်ခြင်း၊ နှင်း သို့ မိုး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းတို့မှတဆင့် ရေလွှမ်းခြင်း flooding၊ လမ်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်း road impassibility၊ လျှပ်ပြက်ခြင်း၊ တောမီး wildfire လောင်ခြင်းနှင့် ဒေါင်လိုက် အလျားလိုက် လေစောင်းတိုက်ခြင်း (vertical and horizontal wind shear) တို့ကို ဖြစ်ပွားစေသဖြင့် လူတို့ အသက်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ဆုံးရှုံးစေသော အန္တရာယ်ရှိပေသည်။
Systems with significant rainfall and duration help alleviate drought in places they move through. Heavy snowfall can allow special recreational activities to take place which would not be possible otherwise, such as skiing and snowmobiling.
မိုးရေချိန်များစွာနှင့် အချိန်ကြာကြာ ရွာကျသည် ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ ဖြတ်သန်းသွားရာ နေရာများ၌ ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှု၊ မိုးခေါင်ခြင်း drought တို့မှ သက်သာရာ ရစေသည်။ နှင်း သည်းထန်စွာ ကျဆင်းမှုသည် အချို့ဒေသများတွင် နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းဘောလုံးလှိမ့်ခြင်း စသကဲ့သို့သော အထူးတလည် အပန်းဖြေစရာများ ရရှိစေသည်။
အင်္ဂလိပ်စာလုံး storm သည် ပရိုတို-ဂျာမနစ် sturmaz မှ ဆင်းသက်လာပြီး၊ ဆူညံသံ၊ ဗွက်လောရိုက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
လေဖိအားနည်း low pressure ရပ်ဝန်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လေဖိအားများ မြင့်တက်လာသောအခါ မုန်တိုင်းတလုံး အစပျိုးလာသည်။
ထိုဆန့်ကျင်ဘက် အင်အားများ ထိပ်တိုက်ဆုံ ပေါင်းစည်းမိသောအခါ တိုက်လေများ ဖြစ်ပေါ်ကာ၊ ရလဒ်အဖြစ် မိုးတိမ်တောင် cumulonimbus ကဲ့သို့သော မုန်တိုင်းတိမ် storm clouds များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ကုန်းတွင်းဧရိယာတွင် လေဖိအားနည်း အငယ်စား ဖြစ်လာလျှင် ပူသော ကုန်းမြေပေါ်မှ လေပူများသည် အထက်သို့ တက်သည့်အခါ၊ ဖုန်သရဲ (dust devils) နှင့် လေဝဲ (whirlwinds) ကဲ့သို့သော ဝဲကတော့များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Classic summer storm in Sierras de Córdoba, Argentina. အာဂျင်တီးနား၊ ဆယ်ရက် ဒယ် ကော်ဒိုဘာရှိ နွေမုန်တိုင်း။
Typhoon Haiyan,amassive tropical cyclone that struck the Philippines in late 2013. တိုင်ဖွန်း ဟိုင်ယန်၊ ၂၀၁၃ တွင် ဖိလစ်ပိုင်တွင် တိုက်သော အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းကြီး။
A tornado in Binger, Oklahoma during the 1981 outbreak. ၁၉၈၁ မေ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်စဉ် အိုကလာဟိုးမား၊ ဘင်းဂျား၌ တွေ့သော လေဆင်နှာမောင်း။
Trees felled by downbursts in the Boundary Waters – Canadian derecho of 1999. ၁၉၉၉ ဘောင်ဒရီဝေါတား ကနေဒီယန်း ဒယ်ရီချိုတွင် မိုးပုဆိန်ကြောင့် လဲကျသော သစ်ပင်များ။
မုန်တိုင်းအတွက် သရုပ်သဏ္ဌာန်နှင့် အမည်နာမ များစွာ ရှိသည်။
ဆီးနှင်းမုန်တိုင်း – နေရာအလိုက် အချိန်အလိုက် ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းကို သတ်မှတ်ပုံ ပြောင်းလဲသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ လေပြင်း၊ နှင်းသည်းကျခြင်း (အနည်းဆုံး တနာရီ ၅ စင်တီမီတာနှုန်းဖြင့် စုပုံ) နှင့် ချမ်းအေးသော အခြေအနေ (အနီးစပ် -၁၀ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ် သို့ ၁၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်အောက်) တို့ လိုက်လာတတ်သည်။
ဗုံးဆိုင်ကလုံး – စံအားဖြင့် သမုဒ္ဒရာပေါ်၌ ဖြစ်ပွားသော်လည်း၊ ကုန်းမြေပေါ်မှာပါ ဖြစ်နိုင်သော အလတ်စား လတ္တီကျု ဆိုင်ကလုန်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာခြင်းမျိုး။ ထိုမုန်တိုင်းတွင်း ကြုံတွေ့ရသည့် တိုက်လေများသည် တိုင်ဖွန်း သို့ ဟာရီကိန်း၏ တိုက်လေများလောက် အားကြီး၍ ပြင်းထန်သည်။
ကမ်းမြောင်မုန်တိုင်း – ကမ်းရိုးတန်းဇုန်ကို ထိုးနှက်သော လေလှိုင်းကြီး နှင့်/သို့ မုန်တိုင်းစွယ်။ ကမ်းရိုးတန်းများ တိုက်စားခံရပြီး၊ ရေလွှမ်းမိုးသည်အထိ ထိခတ်မှု ရှိသည်။
ဒယ်ရီချို – ဒယ်ရီချိုသည် ကျယ်ပြန့်သော ကြာမြင့်သော အဖြောင့် လေမုန်တိုင်း တလုံး ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော မိုးကြိုးမုန်တိုင်း၏ ကုန်းတွင်းပိုင်း လျင်မြန် ရွေ့လျားနေသော အုပ်စုနှင့် ပတ်သက်သည်။
ဖုန်ကတော့ – လေများ အပေါ်တက်သည့် ကုန်းတွင်း ဝဲကတော့ငယ်။
လေနီကြမ်း ဝါ ဖုန်မုန်တိုင်း – လေထဲတွင် ဖုန်နှင့်တကွ မြေလွှာပါ အမြောက်အမြား ပါလာသော အခြေအနေ တမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်မြင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းသည်။
Ice storm –  Ice storms are one of the most dangerous forms of winter storms. When surface temperatures are below freezing, butathick layer of above-freezing air remains aloft, rain can fall into the freezing layer and freeze upon impact intoaglaze of ice. In general, ၈ မီလီမီတာ (၀.၃၁ လက်မ) of accumulation is all that is required, especially in combination with breezy conditions, to start downing power lines as well as tree limbs. Ice storms also make unheated road surfaces too slick to drive upon. Ice storms can vary in time range from hours to days and can cripple small towns and large metropolitan cities alike.
In September 1994, the Hubble telescope – using Wide Field Planetary Camera2– imaged storms on Saturn generated by upwelling of warmer air, similar toaterrestrial thunderhead. The east-west extent of the same-year[ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။] storm equalled the diameter of Earth. The storm was observed earlier in September 1990 and acquired the name Dragon Storm.
Effects on human society[ပြင်ဆင်ရန်]
"Storm damage" ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ the British television film အတွက် Storm Damage တွင်ရှုပါ။
အခြားကြည့်ရန်။ Acid rain၊ Effects of tropical cyclones၊ Hail၊ Lightning၊ Snow၊ Wildfire၊ Wind၊ နှင့် Wind shear
Hail damage to roofs often goes unnoticed until further structural damage is seen, such as leaks or cracks. It is hardest to recognize hail damage on shingled roofs and flat roofs, but all roofs have their own hail damage detection problems. Metal roofs are fairly resistant to hail damage, but may accumulate cosmetic damage in the form of dents and damaged coatings. Hail is alsoacommon nuisance to drivers of automobiles, severely denting the vehicle and cracking or even shattering windshields and windows. Rarely, massive hailstones have been known to cause concussions or fatal head trauma. Hailstorms have been the cause of costly and deadly events throughout history. One of the earliest recorded incidents occurred around the 9th century in Roopkund, Uttarakhand, India. The largest hailstone in terms of diameter and weight ever recorded in the United States fell on July 23, 2010 in Vivian, South Dakota in the United States; it measured ၈ လက်မ (၂၀ စင်တီမီတာ) in diameter and ၁၈.၆၂ လက်မ (၄၇.၃ စင်တီမီတာ) in circumference, weighing in at ၁.၉၃ ပေါင် (၀.၈၈ ကီလိုဂရမ်). This broke the previous record for diameter set byahailstone7inches diameter and 18.75 inches circumference which fell in Aurora, Nebraska in the United States on June 22, 2003, as well as the record for weight, set byahailstone of ၁.၆၇ ပေါင် (၀.၇၆ ကီလိုဂရမ်) that fell in Coffeyville, Kansas in 1970.
Hail is one of the most significant thunderstorm hazards to aircraft. When hail stones exceed ၀.၅ လက်မ (၁၃ မီလီမီတာ) in diameter, planes can be seriously damaged within seconds. The hailstones accumulating on the ground can also be hazardous to landing aircraft. Strong wind outflow from thunderstorms causes rapid changes in the three-dimensional wind velocity just above ground level. Initially, this outflow causesaheadwind that increases airspeed, which normally causesapilot to reduce engine power if they are unaware of the wind shear. As the aircraft passes into the region of the downdraft, the localized headwind diminishes, reducing the aircraft's airspeed and increasing its sink rate. Then, when the aircraft passes through the other side of the downdraft, the headwind becomesatailwind, reducing lift generated by the wings, and leaving the aircraft inalow-power, low-speed descent. This can lead to an accident if the aircraft is too low to effectarecovery before ground contact. As the result of the accidents in the 1970s and 1980s, in 1988 the U.S. Federal Aviation Administration mandated that all commercial aircraft have on-board wind shear detection systems by 1993. Between 1964 and 1985, wind shear directly caused or contributed to 26 major civil transport aircraft accidents in the U.S. that led to 620 deaths and 200 injuries. Since 1995, the number of major civil aircraft accidents caused by wind shear has dropped to approximately one every ten years, due to the mandated on-board detection as well as the addition of Doppler weather radar units on the ground. (NEXRAD)
Notable storms in art and culture[ပြင်ဆင်ရန်]
In mythology and literature[ပြင်ဆင်ရန်]
အခြားကြည့်ရန်။ Genesis flood myth
In fine art[ပြင်ဆင်ရန်]
In motion pictures[ပြင်ဆင်ရန်]
တမ်းပလိတ်:Col div end
↑ Harley၊ Mitchell (March 24, 2017)။ "Chapter 1: Coastal Storm Definition"။ in Ciavola၊ Paolo; Coco၊ Giovanni (eds.)။ Coastal Storms: Processes and Impacts။ John Wiley & Sons။ pp. 1–22။ ISBN 978-1-118-93710-5။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Ocean Prediction Center. Terminology and Weather Symbols. Retrieved on 2006-11-26.
↑ Different Types of Storms That Will Blow Your Mind (28 November 2014)။
↑ City of Kent, Washington. Snow/Ice Storm. Archived February 28, 2008, at the Wayback Machine.
↑ windstorm။ merriam-webster။
↑ Hurricanes and Windstorm Coverage" Adjusters International။
↑ Derecho။ National Oceanic and Atmospheric Administration။
↑ "Jupiter's Great Red Spot: Our Solar System's Most Famous Storm" (in en)၊ Space.com၊ October 2019။
↑ Philips၊ Tony (2001-07-16)။ Planet Gobbling Dust Storms။ NASA Science News။
↑ Pyle၊ Rod (2012)။ Destination Mars။ Prometheus Books။ pp. 73–78။ ISBN 978-1-61614-589-7။
↑ Rincon၊ Paul။ "'Superstorm' rages on exoplanet"၊ BBC News London၊ 23 June 2010။
↑ 10 Types Of Alien Weather That Put Earth To Shame (2014-06-16)။
↑ Chris Landsea (1998)။ How does the damage that hurricanes cause increase asafunction of wind speed?။ Hurricane Research Division။
↑ Staff Writer။ "Hurricane Katrina Situation Report #11"၊ Office of Electricity Delivery and Energy Reliability (OE) United States Department of Energy၊ 2005-08-30။
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ James M. Shultz, Jill Russell and Zelde Espinel (2005). "Epidemiology of Tropical Cyclones: The Dynamics of Disaster, Disease, and Development". Epidemiologic Reviews 27: 21–35. Oxford Journal. doi:10.1093/epirev/mxi011. PMID 15958424.
↑ Scott, A (2000). "The Pre-Quaternary history of fire". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 164 (1–4): 281–329. doi:10.1016/S0031-0182(00)00192-9. Bibcode: 2000PPP...164..281S.
↑ Vladimir A. Rakov (1999)။ Lightning Makes Glass။ University of Florida, Gainesville။
↑ Lightning and Its Hazards။ Hughston Sports Medicine Foundation (2009-01-09)။
↑ Charles H. Paxton, J. Colson and N. Carlisle (2008)။ P2.13 Florida lightning deaths and injuries 2004–2007။ American Meteorological Society။
↑ G. E. Likens, W. C. Keene, J. M. Miller and J. N. Galloway (1987). "Chemistry of precipitation fromaremote, terrestrial site in Australia". Journal of Geophysical Research 92 (13): 299–314. doi:10.1029/JA092iA01p00299. Bibcode: 1987JGR....92..299R.
↑ "Tropospheric sources of NOx: Lightning and biology" (1984). Atmospheric Environment 18 (9): 1797–1804. doi:10.1016/0004-6981(84)90355-X. PMID 11540827. Bibcode: 1984AtmEn..18.1797L.
↑ Office of Air and Radiation Clean Air Markets Division (2008-12-01)။ Effects of Acid Rain – Surface Waters and own Aquatic Animals။ United States Environmental Protection Agency။
↑ Hail Damage to Roofs။ Adjusting Today။
↑ David Orr (2004-11-07)။ Giant hail killed more than 200 in Himalayas။ Telegraph Group Unlimited via the Internet Wayback Machine။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ Hailstone record press release။ National Weather Service (2010-07-30)။
↑ Newman၊ Robert C. (2009)။ Computer Security: Protecting Digital Resources။ Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning။ p. 100။ ISBN 978-0-7637-5994-0။
↑ Laura Cheshire (1997)။ Have Snow Shovel, Will Travel။ National Snow and Ice Data Center။
↑ Dave Larsen။ "School districts are using up calamity days"၊ Dayton Daily News၊ Dayton, Ohio: Cox Enterprises၊ 2009-01-27။ "Ohio school districts can use five calamity days before they must start adding extra days to the school calendar."
↑ Donna Willis။ "Districts Consider Calamity Options"၊ WCMH-TV၊ Columbus, Ohio: Media General၊ 2009-01-30။
↑ Joleen Ferris။ "Decision for city schools to stay open prompts calls from irate parents"၊ WKTV၊ Utica, New York: Smith Media၊ 2009-01-28။
↑ "Snow may stretch out school year"၊ The Cincinnati Enquirer၊ Cincinnati, Ohio: Gannett Company၊ 1999-03-09။
↑ David A. Kuemmel (1994)။ Managing roadway snow and ice control operations။ Transportation Research Board။ p. 10။ ISBN 978-0-309-05666-3။
↑ United Nations Environment Programme (Winter 1996). "Using Snow For Cool, Innovative Solutions". Insight.
↑ Nolan J. Doesken (April 1994). "Hail, Hail, Hail ! The Summertime Hazard of Eastern Colorado". Colorado Climate 17 (7).
↑ John E. Oliver (2005)။ Encyclopedia of World Climatology။ Springer။ p. 401။ ISBN 978-1-4020-3264-6။
↑ Damon P. Coppola (2007)။ Introduction to international disaster management။ Butterworth-Heinemann။ p. 62။ ISBN 978-0-7506-7982-4။
↑ M. Baldwin (2002-09-08)။ How Cold Can Water Get?။ Argonne National Laboratory။
↑ Whipple, Addison (1982)။ Storm။ Alexandria, VA: Time Life Books။ pp. 54။ ISBN 0-8094-4312-0။
↑ Christopherson, Robert W. (1992)။ Geosystems: An Introduction to Physical Geography။ New York: Macmillan Publishing Company။ pp. 222–224။ ISBN 0-02-322443-6။
↑ Hail Threat Standardisation။ European Aviation Safety Agency. RP EASA.2008/5 (November 2010)။
↑ Federal Aviation Administration (2009)။ Hazards။
↑ National Aeronautics and Space Administration, Langley Air Force Base (June 1992)။ Making the Skies Safer From Windshear။
↑ Christopher Clarey (1998-02-01)။ NAGANO '98; BuildingaBetter Snowman Through Science။ New York Times။
↑ Sam Baldwin (January 2006)။ Skiers vs Snowboaders: The Dying Feud။ SnowSphere.com။
↑ Snowmobiling Facts။ International Snowmobile Manufacturers Associations (2006)။
↑ Jeffrey Selingo (2001-02-08)။ Machines Let Resorts Please Skiers When Nature Won't။ New York Times။
↑ Washington Trails Association (2007-12-05)။ Winter Hiking and Avalanche Danger။
↑ ၅၆.၀ ၅၆.၁ Larson, Erik (1999)။ Isaac's Storm။ Random House Publishing။ ISBN 0-609-60233-0။
↑ "Lessons learned from Great Storm"၊ BBC News၊ 14 October 2007။
↑ Met Office: The Great Storm of 1987။
↑ NOAA Meteorologist Bob Case, the Man Who Named the Perfect Storm။ National Oceanographic & Atmospheric Administration News (2000-06-16)။
Chisholm၊ Hugh, ed. (1911)။ "Storm" ။ Encyclopædia Britannica (11th ed.)။ Cambridge University Press။ Cite has empty unknown parameters: |HIDE_PARAMETER15=၊ |HIDE_PARAMETER13=၊ |HIDE_PARAMETER14c=၊ |HIDE_PARAMETER14=၊ |HIDE_PARAMETER9=၊ |HIDE_PARAMETER3=၊ |HIDE_PARAMETER1=၊ |HIDE_PARAMETER4=၊ |HIDE_PARAMETER2=၊ |HIDE_PARAMETER8=၊ |HIDE_PARAMETER20=၊ |HIDE_PARAMETER5=၊ |HIDE_PARAMETER7=၊ |HIDE_PARAMETER10=၊ |separator=၊ |HIDE_PARAMETER14b=၊ |HIDE_PARAMETER6=၊ |HIDE_PARAMETER11=, နှင့် |HIDE_PARAMETER12= (အကူအညီ)
Wikimedia Commons ရှိ Storms နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
ဝစ်ရှင်နရီရှိ bhone.bm/sandbox အကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဝီကီကိုးကားချက်ရှိ Bhone.bm/sandbox နှင့်ပတ်သက်သော ကိုးကားချက်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:Bhone.bm/sandbox&oldid=719798" မှ ရယူရန်